Ahoana ny fomba filalaovana Roblox amin'ny Chromebook? - Lalao
Ny fanovana avy any Windows mankany amin'ny Chromebook dia mety hahasosotra kely anao satria tsy afaka milalao ny lalao ankafizinao toy ny fanaonao taloha. Mety hanakana anao tsy hilalao ny lalao ankafizintsika toa an'i Roblox izany, sa tsy izany?Raha eny ny valinteninao, dia aza manahy ianao anio fa efa nilaza ny vahaolana farany amin'ity lahatsoratra ity izay hanazava aminao ny fomba ahafahanao milalao Roblox amin'ny Chromebook. Ireo dingana voalaza dia mahitsy ary tsy handany fotoana firy.Ka raha tsy misy ny fandoavam-potoana hafa dia andao jerena ny fomba ahafahanao milalao Roblox amin'ny Chromebook.
Afaka milalao Roblox amin'ny Chromebook ve ianao?
Betsaka ny fiheveran-diso momba ny hoe afaka milalao ny lalao Android tianao amin'ny Chromebook ianao na tsia. Ankehitriny dia hanaiky ity fanontaniana ity isika izao. Fa raha tsy maintsy mamaly an'ity fanontaniana ity izahay dia mety raha afaka milalao Roblox amin'ny Chromebook ianao dia ho 'Eny'.
Miaraka amin'ny fandrosoana lehibe eo amin'ny haitao sy ny haitao simulation, niova tanteraka ny zava-drehetra ho an'ny mpilalao, ary afaka milalao lalao Android toa ny Roblox ao amin'ny Chromebook mora foana isika izao. Roblox dia lalao milina hazakazaka Android izay azo lalaovina ao amin'ny Chromebook amin'ny fomba mitovy amin'izany satria milalao amin'ny fitaovana Android ianao. Niresaka dingana vitsivitsy vitsivitsy izahay fa raha manaraka azy ireo ianao dia tsy ho afaka hilalao Roblox fotsiny fa ho an'ny Lalao Android.
Fomba tsara indrindra hilalaovana Roblox amin'ny Chromebook:
Fomba # 1: Avy amin'ny Play Store:
Ny fomba tsotra indrindra anaovana Roblox amin'ny Chromebook dia amin'ny alàlan'ny fampidinana azy ao amin'ny Google Play Store an'ny Chromebook anao. Ireto misy sasany amin'ireo dingana fampidinana Roblox avy amin'ny Play Store.
Mandrosoa ny Play Store ao amin'ny Chromebook anao ary hikaroha ‘Roblox’ eo amin'ny bara fikarohana.
Raha vantany vao hitanao ny tsindry Roblox eo aminy, ary hapetraka amin'ny fitaovanao izany.
FANAMARIHANA:Ity fomba fampidinana an'i Roblox ity dia tsy mandeha raha tsy mifanentana amin'ny Play Store ny Chromebook anao. Ny sasany amin'ireo maodelin'ny Chromebook taloha dia tsy manohana ny Play Store, ary tsy hahita iray ianao raha mitady azy. Saingy azo sakanana io sakana io raha manaraka ireo dingana voalaza ireo ianao.
Mandehana any amin'ny Settings amin'ny fitaovanao, kitiho ny safidin'ny Apps amin'ny ilany havia ary alefaso ny Play Store.
Tsidiho ny Play Store avy amin'ny tranonkala na kitiho Eto . Haterina amin'ny pejy ahafahanao mametraka Roblox amin'ny fitaovanao ianao. Tsindrio ny Install mba hampidinana azy amin'ny fitaovanao.
Raha vantany vao tafapetraka i Roblox, azonao atao ny mandefa azy avy ao anaty vatasarihana fampiharana ary milalao azy toy ny pro. Izy io koa dia hanohana ny bokotra WASD mahazatra sy ny totozy totozy.
Fomba # 2: Mametraka Roblox amin'ny ARC Welder
Ankehitriny ny Play Store dia manjary tsy maintsy atao ao amin'ny Chromebook rehetra jerenao, saingy misy kinova taloha kokoa tsy mankafy Play Store, ka lasa sarotra ny mampiasa fampiharana Android. Noho izany, raha iray amin'izy ireo ny fitaovanao, dia aza manahy, manonona fomba tsotra hampandehanana an'i Roblox izahay amin'ny alàlan'ny fanampian'ny ARC Welder.
Inona ny ARC Welder?
ARC Welder dia fampiharana izay mamadika ny Android App anaoamin'ny fampiharana Chrome OS. Na izany aza, ity dia mety misy glitches kely na bug izay tsara tanteraka fa tsy dia tsikaritra loatra.Raha te-hisintona ny ARC Welder ary hametraka Roblox, azonao atao ny manaraka ireo dingana ireo mba tsy hianjera ianao na aiza na aiza.
Sintomy ny APK an'ny Roblox amin'ny fipihana Eto ary tsarovy ny lahatahiry izay anaovana azy.
Sintomy ny extension extension ARC Welder amin'ny fipihana Eto na amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny Google Chrome Extension sy ny fikarohana ny ARC Welder. Manodidina ny 200 MB ny haben'ny rakitra, koa manàna faharetana rehefa misintona azy.
Aorian'ny famaranana ny fametrahana dia azonao atao ny mandefa ny tsindry ARC Welder amin'ny bokotra 'Safidio', izay ho eo amin'ny zoro ambany ankavanana.
Vantany vao vita dia safidio nylahatahiryizay nandefasanao ny Roblox APK ary kitiho ny kiheba ‘Open’. Aza adino fa tsy tianao ny APK eto.
Aorian'ny fisafidianana ny lahatahiry anao dia angatahina ianao hisafidy ny rakitra APK anao hanaovana andrana. Safidio ny APK anao avy amin'ny lahatahiry nofidinao ary tsindrio ny 'Open'. Mety mila fotoana fohy ny fanodinana ilay rakitra.
Raha vantany vao feno ny APKo dia angatahina ianao handrindrana toe-javatra vitsivitsy.Manoro hevitra anao izahay mba hizaha antoka fa ny orientation dia voafantina ho ‘Landscape’, ny form Form dia napetraka ho ‘Tablet’, ny Resize dia voafantina ho ‘Reconfigure’, ary ny Clipboard Access dia voafidy ho ‘Eny’.Raha vantany vao voalamina ireo rehetra ireo dia tsindrio ny 'Fitsapana eo amin'ny zoro havanana ambany.
Raha vantany vao vita izany rehetra izany, Roblox dia halefa ho azy, ary afaka milalao Roblox ianao amin'ny alàlan'ny lakile WASD sy totozy ivelany.
Ka io no lahatsoratray fohy sy fohy momba ny fomba ahafahanao mametraka sy milalao Roblox amin'ny Chromebook mora foana. Azonao atao ny manandrana ny iray amin'ireto dingana roa ireto hilalaovana Roblox ao amin'ny Chromebook, ary azonay antoka fa ireo voalaza ireo dia hamaha ny olanao ary hamela anao hilalao Roblox mbola tsara kokoa noho ny teo aloha.
Raha nahavita nametraka sy nilalao Roblox tao amin'ny Chromebook ianao rehefa avy nampiasa ny dianay, dia ampahafantaro anay ao amin'ny boaty fanamarihana etsy ambany na raha sendra olana ianao dia aza misalasala manontany anay. Hiverina aminao izahay miaraka amin'ny vahaolana mahomby faran'izay haingana.
Fampidinana maimaim-poana Roblox
Nintendo Switch 2 - Daty famoahana, karazana sy famoahana
tranokala fandefasana sarimihetsika finday tsara indrindra
jereo ilay sarimihetsika maimaim-poana amin'ny Internet
Ahoana ny fomba hahazoana hulu amin'ny mpianatra spotify
kaody fampandehanana roku amin'ny fotoana fampisehoana
safidy amin'ny serivisy fahitalavitra